पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् आजको राशिफल
May 31, 2021 N88LeaveaComment on पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् आजको राशिफल
२०७८ जेेठ १८ गते, मंगलवार, १ जुन २०२१। ज्येष्ठ कृष्णपक्ष षष्ठी तिथि (प्रातः ६ः१३ बजेदेखि सप्तमी)। धनिष्ठा नक्षत्र (२१ः०८ बजेदेखि शतभिषा)। चन्द्रराशि– मकर (९ः०७ बजेदेखि कुम्भ)। मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : आयस्रोत राम्रो हुनाले आवश्यक भौतिक साधन जुट्नेछन्। सानो कामले पनि राम्रो आम्दानी दिलाउनेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। व्यापारमा राम्रै […]
कांग्रेस नेता खतिवडा भन्छन्, ‘महेश बस्नेत दिउँसै गाँजा खाएर गफ दिन थालेछन्’
May 31, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेस नेता खतिवडा भन्छन्, ‘महेश बस्नेत दिउँसै गाँजा खाएर गफ दिन थालेछन्’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरी खतिवडाले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत दिउँसै गाँजा खाएर बोल्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता बस्नेतले नेपाली कांग्रेस पार्टी फुटाइदिने बताएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि नेता खतिवडाले कडा टिप्पणी गरेका हुन् । कांग्रेस नेता खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘महेश बस्नेत भन्ने पूर्वमन्त्री र […]
May 31, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘एसियाको भविष्य’ का नेताका रुपमा छनौट
काठमाडाैं । बर्तमान राजनीतिक तिक्तताका बाबजुद पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘एसियाको भविष्य’का नेताको रुपमा छनौट गरेको छ । जापानको राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो फ्रण्ट पेजमा एसियाको भविष्य निर्माणका १० नेताको छनौट गरेको जनाइएको छ । २६औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आठ औं नम्बरमा छनौट गरेको छ । दरिलो लिडरसिपले […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतत्वमा गठित वर्तमान इजलासलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ । आज आउने भनिएको आदेशका लागि निर्णय भइसकेको छ । न्यायाधीश फेर्दा सरकार पक्षले फेरि निवेदन दिने र फेरि झमेला हुने निष्कर्ष निकालेर प्रधानन्यायाधीश जबरा वर्तमान इजलासलाई नै निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेका हुन् । आदेश केही बेरमा आउँदैछ […]
May 31, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेस – माओवादी नै फुटाइदिने एमाले नेता महेश बस्नेतकाे चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा आफूहरु भएको दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा २३ भन्दा बढी सांसद र माओवादी केन्द्रमा २५।२६ सांसदले पार्टी विभाजन गर्न लागिरहेको भन्दै बस्नेतले दुवै दल विभाजन गर्न सक्ने हैसियत आफूहरुसँग भएको दाबी गरेका हुन् । ‘हिजो एमालेविरुद्ध सत्तोसराप […]
मुस्ताङको मुक्तिनाथ (३८०० मिटर) मन्दिर पवित्र थलो हो हिन्दु र बौद्धमार्गि दुबैको साझा तीर्थस्थल पनि । बर्सेनी लाखौंको भिड लाग्छ । मन्दिर दर्शन गरेर त्यहाँको १०८ धारामा नुहाएमा पाप पखालिने र शुद्ध भइने जनविश्वास छ ।मुल मन्दिरभित्रको एउटै शीलालाई हिन्दु र बौद्धमार्गीले आ–आफ्नै ढँगले व्याख्या र पूजा गर्छन । हिन्दु मुल मूर्तिलाई बिष्णुका रुपमा पुज्छन् […]
May 31, 2021 N88LeaveaComment on गिरिजा, माधव, प्रचण्ड र देउवाले हिम्मत गर्न नसकेको काम के पी ओलीले गरेर देखाए
काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । कोष खारेजीका लागि लामो समयदेखि आवाज उठे पनि विभिन्न सरकारले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् । गिरिजा, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा सरकारले गर्न नसकेको कोष खारेजी निर्णय केपी ओली सरकारले लिएको हो । कोषका नाममा सांसदहरुले कमिसन लिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालो कोटको आवरणमा केही व्यक्तिले न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको बताएका छन् । युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशमाथि विपक्षी गठबन्धनका कानुन व्यवसायीले उठाएको प्रश्नप्रति आक्रोश पोखे । ‘वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने अब?’ ओलीले प्रश्न गरे, […]
May 31, 2021 N88LeaveaComment on जिउँदै इट्टा-भट्टामा मान्छे हाल्ने आलमको पक्षमा वकालत गर्ने शम्भु थापाले न्यायाधीशलाई नैतिकता सिकाउने ?
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आइतवार न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरलाई पनि विदामा बस्न भने । नेकपा एकता भंग गरी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने फैसला मागदाबी भन्दा बढि भएको र अहिले निवेदक त्यहीँ पार्टीसँग जोडिएका माधव नेपाल र प्रचण्ड भएको भन्दै थापाले न्यायाधीशमाथि निष्पक्षता र नैतिकताको प्रश्न […]
महेश बस्नेतको प्रश्न : काँग्रेसले बहुदलीय व्यवस्था छोडेको हो ?
May 31, 2021 N88LeaveaComment on महेश बस्नेतको प्रश्न : काँग्रेसले बहुदलीय व्यवस्था छोडेको हो ?
काठमाठाैं । एमाले नेता महेश बस्नेतले नेपाली काँग्रेसले बहुदलीय व्यवस्था छोडेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय युवा संघको बैठकमा बोल्दै युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका बस्नेतले बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्दति छोडेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । ‘म काँग्रेसका नेता र बुद्धिजीवीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु । […]